पाँचौ दिन ५० हजार मान्छे मेलामा, आज अन्तिम
नेपाल टेलिकमले दसैँतिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै डाटादेखि एसएमएस सेवासम्म छुटको अफर ल्याएको छ। डाटा अफर जीएसएम तथा सीडीएमएका प्रिपेड तथा पोष्टपेडका ग्राहकले डाटा लिई त्यसमा निःशुल्क भ्वाइस तथा
तपाईको फेसबुक वालमा तपाइकै नाम जोडिएर कुनै भिडियो लिंक पोष्ट भयो? वा तपाइलाई थाहै नभइ तपाईको नाममा अरूको अकाउन्टमा गयो? कुनै आकर्षक अफर सहितको म्यासेज पो आयो कि? उत्तेजक भिडियो
तपाइँ yahoo चलाउनु हुन्छ,पासवर्ड तुरुन्त फेर्नुहोस्
चर्चित इमेल सेवा प्रदायक याहुले आफ्ना ५० करोड भन्दा बढि प्रयोगकर्ताका अकाउन्टहरू ह्याक भएको सार्वजनिक गरेको छ । ह्याकरले प्रयोगकर्ताका इमेल ठेगाना, पासवर्ड, सेकुरिटी प्रश्न उत्तर लगायतका संवेदनशिल सूचना चोरी